Al-Shabaab oo yeelatey hogaamiye cusub & kii hore oo ku biirey Al-Qaacida (Warbixin) – SBC
Al-Shabaab oo yeelatey hogaamiye cusub & kii hore oo ku biirey Al-Qaacida (Warbixin)
Posted by editor on August 9, 2011 Comments
Xarakada Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya ayaa la sheegay in ay badaleen hogaamiyahoodii hore Axmed Cabdi Godane oo Shabaabka dhexdiisa looga yaqaan Sheekh Mukhtaar C/raxmaan abuu Zubeyr waxaana la sheegay in uu xilkiisii la wareegay Ibraahim Xaaji Jaamac Meecaad (Ibrahim Afqaani) balse Shabaabka dhexdiisa loogu yeero Abubakar A-Zeylici.
Badalka hogaanka sare ee Shabaabka ayaa ku soo aadaysa iyadoo xarakada Shabaab ay ku wiiqmeen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaana la sheegay in guuldarada dhanka shacabka & military-ga ee soo gaartey kooxda ay ugu wacan tahay khilaaf ba’an oo soo kala dhexgaley hogaanka kooxda gaar ahaan Ibrahim Afqaani & Axmed Godane.
Kulan ka dhacay magaalada Muqdisho horaantii todobaadkii hore ka hor intii aanay ku dhawaaqin Shabaabku inay ka baxeen Muqdisho waxaa lagu go’aamiyey in la badalo hogaanka ururka isla markaana meesha laga saaro khilaafka u dhaxeeya labada nin ee isku haysta xilkaasi ee isku haybta ka soo jeeda.
Warar hoose ayaa sheegaya in Axmed Cabdi Godane xilka in laga wareejiyo la gaaray bilooyin ka hor arintaasi oo u xayrinayd khilaafka labada nin iyadoo saraakiisha kale ee kooxda ay lakala safteen labada nin.
Warku wuxuu intaasi ku darayaa in Axmed Godane si cad loogu sheegay in uu xilka wareejiyo arintaasi oo ay isla qaateen saraakiisha kale ee ka soo jeeda beelaha Daaroodka, Hawiyaha & Raxanweynta kuwaasi oo ay ka mid yihiin Xasan Daahir Aweys, Mukhtaar Roobow & Fu’aad Shangole.
Saraakiishan ayaa la sheegay inay aad isagu fikir dhaw yihiin Ibraahim Afgaani, waxaana wararku sheegayaa in go’aan lagu qaatey in Axmed Cabdi Godane laga dhigo wakiilka Al-qaacida ee Bariga Afrika maadama ay Al-Qaacida ka dalbatey Shabaabka inay u soo gudbiyaan ninkii buuxin lahaa booska uu ka baxay wakiilkii Al-Qaacida ee Bariga Afrika Fasul Cabdalla oo Muqdisho lagu diley Muqdisho bishii June ee sanadkan.
Si loo kala saaro Axmed Godane & Ibrahim Afgaani ayaa waxaa la go’aansadey in xilka hogaamiyaha Al-Qaacidada Bariga Afrika laga dhigo Axmed Godane halka Ibrahim Afgaani uu si rasmi ah ula wareegay hogaanka Shabaabka.
Axmed Cabdi Godane (Sheekh Mukhtaar C/raxmaan abuu Zubeyr) wuxuu xilka hogaanka Shabaabka qabtey markii la dilay hogaamiyihii ururkaasi Aadan Xaashi Cayrow oo lagu diley duqeyn ka dhacdey degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud taasi oo ay geysteen Mareykanku.
Axmed Godane wuxuu ahaa gacanta koowaad ee Aadan Cayrow waxaana kuxigeen u noqdey Ibraahim Afgaani oo ay islayihiin beelaha Isaaq, wixii xiligaasi ka dambeeyey loolan awoodeed ayaa labada nin ka dhex aloosmay.